Chii chaungaona muExtremadura | Kufamba Nhau
Mariela Carril | | España, Chii chekuona
Extremadura Iyo ndeimwe yenharaunda dzinozvimiririra dzeSpain uye inoumbwa nemapurovhinzi maviri, Badajoz neCáceres. Iyo inyika ine zviuru nezviuru zvemakore enhoroondo, sekupupurirwa nema dolmens, kupenda kwemapako uye zvidhori zvakachengetedzwa nanhasi.
Mireniyoni iyi inotiunzira nzvimbo zhinji dzevashanyi uye tsika yakapfuma kwazvo, saka nhasi tinokurudzira rwendo rwekuenda kuExtremadura uye nezvinokwezva. Nhasi ipapo chii chaungaona muExtremadura.
2 Chii chaunofanira kushanyira muExtremadura
Inzvimbo iyo iri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweIberian Peninsula uye sezvatakambotaura, inoumbwa nemapurovhinzi maviri ane misoro mikuru maguta ane vanhu vazhinji. Uine inodziya kune yakadzikama mamiriro ekunzeMadomasi, mhiripiri, fodya uye mazambiringa zvinorimwa pano, izvo zvinogadzirwa newaini inonaka.
ari romans vakagara pano, vakavaka migwagwa, maguta akapfuma ane masikisi, misika uye zvivakwa zveruzhinji. Merida, semuenzaniso, rakava rakakura, rine hupenyu, guta rakapfuma mutsika. Gare gare humambo hwaizodonha uye vamwe vanhu vevatorwa vaizosvika, pakati pavo paive ne Visigoths, vakasiya misha yavo Saracens muNguva dzepakati.
Este muslim nguva Aive asina kupfuma zvishoma pane wechiRoma uye yakagara mazana mashanu emakore kusvikira paReconquest, nehumambo hweLeón kutanga uye Humambo hweCastile gare gare. Mushure mekubatanidzwa kwehumambo hwese matunhu maviri eExtremadura pasi pemakorona aya akabatanidzwawo. Chirairo chevaJuda, maChristu nemaMuslim chakapera nehurongwa hweMadzimambo eKatorike kuti vese vanofanira kutendeukira kuChikiristu kana kuti vaizodzingwa
Vazhinji vevashanyi vekuSpain vakauya kuAmerica muzana ramakore rechiXNUMX vaibva kuExtremadura. Semuyenzaniso, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Pedro de Valdivia… Gare gare kukakavadzana kwemukati neHondo yeRusununguko rweSpain zvaizosvika, uye kubva paruoko rwake, kushungurudzika nekutambura uye kutama kwemukati kutiza kubva kwavari.
Chii chaunofanira kushanyira muExtremadura
Tataura kuti Extremadura ine mazana emakore enhoroondo, musimboti isu tinofanirwa kutaura nezve iyo nhaka yemazana iwayo, zviuru zvemakore. Of nguva yechiroma tinogona kushanyira iyo Merida Roma. Matongo eRoma ari muPaza Margarita Xirgu uye anovhura hwindo kunzira yekurarama yevaRoma paPeninsula. zviri Nhaka Yenyika uye imwe yenzvimbo dzinokosha dzekuchera matongo muSpain.
Matongo eRoma ari mukati memadziro ekoloni: kune yemitambo, imba yemitambo uye yemitambo, sekasi uye basilica. Pane iyo Mugero weMinana, iyo Pórtico del fro, iyo Arch yeTrajan, Imba yeMitreo uye Tembere yaDiana. Kunze kwemadziro kune mumwe mugero, weSan Lázaro, zambuko pamusoro perwizi rweGuadiana, Alange matsime anopisa (Makiromita gumi nemasere kubva kuMerida, inofungidzirwa kuti ndeyemuzana ramakore rechitatu AD, pamwe nedzimba dzayo), nemadhamu maviri, Proserpina naCornalvo.
Iyi yekuchera matongo yakavhurwa kubva Kubvumbi kusvika Gunyana kubva 9 am kusvika 10 pm uye pakati paGumiguru naMarch kubva 9 am kusvika 6:30 pm. Kupinda kwacho kunodhura maeuro gumi nesere uye maeuro matanhatu pachivako chimwe nechimwe. Imwe nzvimbo yeRoma ndiyo Cáparra matongo, makiromita mashoma kubva kuguta rePlasencia. Kune nzira iyo mushanyi anotevera uye iyo inomutungamira iye kuburikidza nedudziro nzvimbo, matatu necropolises, magedhi uye nhandare yemitambo. Kupinda kuri mahara.
Tichisiya nguva yevaRoma topinda mu nguva yeArab game Alcazaba, iko kugara kwemadzimambo emutero kubva pakutanga kwaBadajoz. Nhasi zvatinoona zvakabva kunguva yeAlmohad, zana ramakore rechiXNUMX, asi zvinofungidzirwa kuti kwayakabva ndezana ramakore rechipfumbamwe.
Iyo Alcazaba ndeye nhare yaidzorawo muganho nePortugal uye yakakura uye inoshamisa. Iyo ine mikova mina uye iwe unogona kupinda kuburikidza neipi yacho. Kunze kwemikova yeLa Coraxa neyeYelves, kune mikova yeApéndiz neyeCapitel, ayo anobva kunguva yeAlmohad.
Kune zvakare shongwe, inomira pakati pavo Torre de Espantaperros, octagonal. Mukati mune Muzinda weCounts weRoca nechivanze icho nhasi chinoshanda seProvince Archaeological Museum, Shongwe yeSanta María, Shongwe yeEpiscopal Palace uye mapindu.
ari panoramic maonero emadziro eLa Alcazaba ivo vakuru. Kupinda kuri mahara uye kubvumirwa hakubhadhariswe. Iyo iri pane iyo Cerro de la Muela. MuCáceres mune iyo Royal Monastery yeGuadalupe Iyo inotora kubva kune diki hermitage iyo yakazove chechi yeMudejar pasi pekutonga kwaAlfonso XI. Chechi yemamongi yave nemavhezheni matatu uye yazvino iri muchitaira cheGothic. Iyo yekukwiridzira ine zvivezwa zvemwanakomana waEl Greco, Jorge Manuel Theotocópuli.
Iyo chaizvo ine yakanaka kwazvo zvemukati uye mamuseum ayo akakosha: imwe ndeyekushongedza, imwe ndeyekupenda uye kuveza, uye imwe ndeyemabhuku madiki. Monastery inovhura kubva 9:30 am kusvika 1 pm uye kubva 3:30 kusvika 6 pm. Iyo yakajairwa mwero ndeye 5 euros. Imwe imba inonakidza yemamongi ndiyo Royal Monastery yeYuste, chivakwa chinokatyamadza chemamongi chaakashandisa mazuva ake ekupedzisira Carlos V. Kugara kwake kwakamushongedza chete. Iyo yemamongi chikamu cheNational Heritage yeSpain. Munguva yechando anovhura kubva Chipiri kusvika Svondo kubva 10am kusvika 6 pm, uye muzhizha kubva 10 am kusvika 8 pm. Kupinda kunodhura 7 euros.
Kana isu tikataura nezve zvakasikwa nharaunda zvino inguva yekuchinja kwe Monfragüe National Park, kune vanoda flora uye ornithology. Inowanikwa mukatatu akaumbwa naPlasencia, Navalmoral de la Mata, uye Trujillo. Rwizi rweTagus ndiyo chikamu chayo uye UNESCO yakazivisa paki Biosphere Reserve.
Munzvimbo idzi dzemakomo mune matsime, hova, matombo, masango nemakwenzi inova ndiyo nzvimbo yekugara yakanaka akasiyana-siyana uye akapfuma maruva nemhuka. Shiri dzerudzi rwese, svosve dema, magora, makondo, nemhuka dzakaita semakudo, nondo, otter ...
Mukati mepaki mune nhare yeMonfragüe, Arabhu, yaigarwa panguva iyoyo naMambokadzi Noeima, maererano nengano murudo nemuKristu uye nekuda kwechikonzero ichocho akarangwa. Kune zvakare guta re Villareal de San Carlos, kwaunogona kugara, kudya nekushanyira nzvimbo dzevashanyi kuti uwane ruzivo nezvenharaunda iyi. Kune nzira dzakatumirwa nemasaini dzinokutora iwe kuburikidza nepaki uye kunyanya uchienda kuGitano mapopoma emvura, makiromita mazana matatu pakakwirira pamusoro peRwizi rweTagus. Runako irworwo!
Imwe nzvimbo yekuita trekking uye kupinda mumadziva echisikigo kunogona kuve iyo meander weMelero. ari Los Barruecos Chikumbaridzo ChakasikwaMuCáceres, iwe uchaona inoshamisa matombo mamiriro ane madziva uye dzimba. Iyo Orellana Beach Ndiwo mahombekombe edziva rine zita rimwe chete, muOrellana la Vieja, muBadajoz.
Ndicho bhuruu mureza pamhenderekedzo uye igungwa riri mukati megungwa. Iyo inozivikanwa zvakare sePlaya Costa Dulce uye iwe unogona kuita akasiyana mitambo yemvura. Pamahombekombe erimwe dziva, iro dziva reGabriel y Galán, asi kuCáceres, ndiko Granadilla Nhoroondo Yakaomarara.
Yakanga iri guta rakavambwa nevaMuslim muzana reXNUMXth century, rakakomberedzwa, uye muchiitiko chekuwanikwazve kuti ive tsika yekushanya yekuenda. Inochengetedza masvingo aro eAlmohad, inhare yakashandurwa ikava nhare yechiKristu, dzimba dzekugara dzemhuri dzevanhu vakakosha, dzimwe nguva dzakatangira muzvivakwa zvavo, uye chechi yeparishi yezana ramakore regumi nerimwe.
Neichi chidimbu chinyorwa chezvaunofanira kuona mukati Extremadura zvirokwazvo tiri kutadza. Uye ndeyekuti Extremadura inharaunda yakakura kwazvo, isingakwanisike kuenda kwese kana uine mazuva mashoma. Kana iyi iri nyaya yako, imwe yekupedzisira tip, yekutarisa nzvimbo nemazano: Merida neCáceres hazvigoneke, Badajoz futi, asi nekuwedzera kune izvo zvatinowedzera, kana iwe uchida chimwe chinhu chakanyarara kupfuura aya maguta, enda kumataundi. Ipapo unogona kunyatso zorora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Getaways Europe » España » Zvokuona muExtremadura
Faedo kubva kuCiñera